Nanangana Fikambanana ( BAKE) ny Bilaogera Kenya. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2011 4:45 GMT
Tamin'ny Zoma 25 Martsa, Bilaogera Kenyana maromaro no nanao fivoriana tao an-drenivohitr'i Kenya Nairobi, noho ny fananganana fikambanana vaovao BAKE ( Bloggers Association KEnya) (Fikambanana Bilaogera Kenya). Fivoriana fahaefatra notontosain'ny bilaogera maintimolaly Kenyana sasany io fivoriana io. Efa maro ny fitarainana natao, fiampangana ary ohatra koa ny fifamaliana tsotra amin'ny teny miafina ataon'ireo fikambanana bilaogera sy ny fampahalalam-baovao mahazatra momba ny fakan-tahaka, ny tsy fanajana ny zon'ny mpamorona sy ny tsy fisian'ny fankasitrahana ankapobeny avy amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra manoloana ny fiantrakain'ny vaovao avoakan'ny bilaogy amin'ny famoahana vaovao sy ny fampahalalam-baovao ao Kenyà. Izany kizo izany dia voarakotra ao amin'ny lahatsoratra bilaogy vao haingana nataon'i Jacque Ndindan mitondra ny lohateny hoe, Eritreritra sendra nandalo: Ireo lehiben'ny fakan-tahaka mpanao dika-petaka.
Lahatsoratra bilaogy nalefan'i Kachwanya, iray amin'ireo bilaogera Kenyana mazoto manoratra, ampahafantarina ny fandaharana rehetra sy ny fikasana ary ny tanjona kendren'ny fikambanana.
Wanjiku, iray amin'ireo bilaogera tranainy Kenyana, nilaza fa noraketiny an-tsary ny mahakasika ny www.bake.co.ke and www.bake.com mba hampiasain'ny fikambanana BAKE. Karazan'ireo asa ba fihetsiketsehana karakarain'ny BAKE:-
Nampahafantarina an'ireo Bilaogera tonga namonjy ny fivoriana fa i Collins Mbalo no mitantana ny bilaogy ‘ Ny vinavinan'i Nairobia’ sy lehilahy mpanoratra ao amin'ny Global Voices, izay mikasa ny hanome ny soso-keviny amin'ny resaka lalàna momba ny fanaovana hosoka sy ny hala-tahaka amin'ny zon'ny mpamorona ihany koa.